> Resource > Ladnaansho > Sida loo joogto ah Ladnaansho tirtiray Files
Sidee inuu ka soo kabsado File si joogto ah masaxay?
Hello, waxaan qabto su'aal ku saabsan soo kabsaday files si joogto ah la tirtiro ka Windows 7 computer. Waxaan horey u tirtiray document hadalka ka Recycle Bin, oo aan aqoonsanahay in ay si joogto ah la tirtiray a. Waxaan doonayaa in aan ogaado haddii ay jiraan wax siyaabaha loo celin ka computer. Fadlan ha i caawi
Waxaad gudbin oo aan run ahaantii xitaa tageen waxaa la weelna Recycle Bin ama waxa la tirtiray oo leh "Shift + Delete". Waxaa la calaamadeeyay sida la tirtiro xogta iyo sugaya in laga overwritten by xogta cusub ku wadid aad computer ee adag. Marka overwritten dhacdo, waxaad dhihi kartaa file waxaa tirtiray "si joogto ah". Sida ugu dhakhsaha badan waxaad ogaatay in aad file waxaa si joogto ah la tirtiro, aad u baahan tahay si ay u joojiso isticmaalka drive halkaas oo caasimadii.
Waxaad isku dayi kartaa kabsaday files si joogto ah tirtiray iyadoo la kaashanayo Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac , ma files arrinta yihiin weelna Recycle Bin ama la tirtiro leh "Shift + Delete". Waxa uu barnaamijkaaga u awood badan kabashada xogta aad u saamaxaaya in ay ka bogsanayaan oo dhan cayn kasta oo files, ka your computer ama wax kale lagu kaydiyo warbaahinta sida kaadhka xusuusta iyo flash drive, oo ay ku jiraan images, document files, videos, files audio, files archive iyo in ka badan. Muddo 3 hawlaha fudud, oo aad si fiican u soo ceshano karo files oo aad u malaynayso in ay si joogto ah la tirtiro.
Labada Windows users computer iyo dadka isticmaala Mac karaa download version tijaabo ah oo ka mid ah barnaamijka si loo soo celiyo files si joogto ah la tirtiro ka hoos ku qoran hadda!
3 Talaabada inay Qabtaan muhim M4 Data Recovery
Fiiro gaar ah: Fadlan ha soo dajiyo barnaamij ku saabsan xijaab / drive meesha files yihiin tirtiray. Waxaan idin ​​tusin doonaa sida inuu ka soo kabsado file ah oo si joogto ah la tirtiro iyadoo la kaashanayo Windows version of barnaamijka. Waxay leedahay mid ah mabaadiida la version Mac.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada in la soo celiyo files si joogto ah tirtiray a
Sida aad ka arki kartaa image hoos ku qoran, waxaad heli doontaa 3 hababka soo kabashada ka dib markii ay codsiga on your computer: "lumay Recovery File", "Recovery ah Barzakh," iyo "Recovery File ceeriin ah".
Si aad u soo kabsado files si joogto ah la tirtiro, ha la qaado "lumay Recovery File" mode sida isku day ah oo hore.
Tallaabada 2 xijaab Scan / la wado meesha aad ku socoto in la soo celiyo files si joogto ah la tirtiro ka
Qalab tusi doono oo dhan qoruhu / drives on your computer, oo aad dooran kartaa mid ka mid ah in aad rabto in aad soo kabsado files ka oo guji "bilow" button in aynu barnaamijka ogaado files lumay it on.
Fiiro gaar ah: Haddii aad ku socoto inuu ka soo kabsado files si joogto ah la tirtiro ka ah kaydinta warbaahinta dibadda, waxaad u baahan tahay in ay ku xirmaan your computer.
Tallaabada 3 Ladnaansho files si joogto ah la tirtiro
Waxaad arki doonaa helay faylasha lagu tilmaami ee "Nooca File" ama "Jidka" ka dib markii iskaanka. Oo waxaad yeelan doontaa in ay ku eegaan sawirada ama magacyada kale ee file si aad u hubiso in faylasha aad tirtiray la aan dib ula karo ama.
Markaas kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan faylasha si joogto ah la tirtiro oo guji "Ladnaansho" si ay u badbaadin drive kale on your computer.